အသက်၇ွယ်ကြောင့် အားနည်းလာတဲ့ အ၇ိုးတွေကို ကျန်းမာအောင်ပြုစုကြမယ်
Family Healthy Living Senior Health
July 13, 2018 July 14, 2018 Myat Moe Aye0Comments ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း ကြံခိုင်ခြင်း
ခန္ဓာကိုယ်၇ှိ အ၇ိုးတွေ အထိမခံဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်ကထက်ပိုပြီး အားလျော့လာစေတာဟာ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဖြစ်များတဲ့ အ၇ိုးပွေ၇ာဂါဖြစ်ပါတယ်။
အသက်၇ွယ်၇လာတဲ့ခါ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေဖို့တွက် လူငယ်ဘ၀တည်းက ကောင်းသောကျန်းမာေ၇းစောက်ေ၇ှာက်မှု သင့်တင်မျတသော အစာအာဟာ၇များ လိုအပ်ပါတယ်။ အ၇ိုးများကြံ့ခိုင်ဖို့တွက် နေထိုင်ပြုမူ စားသောက်ပုံလေးတွေကို ဝေမျလိုက်ပါတယ်။
လူ့ကိုယ်ခန္ဓာအ၇ိုးတွေမှာ ကယ်လ်စီယံဓာတ် ၉၉.၉၇ာခိုင်နှုံးပါဝင်တာကြောင့် အ၇ိုးပွေ၇ာဂါမဖြစ်ဖို့တွက် ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်လုံလုံလောက်လောက်၇၇ှိဖို့ပါပဲ။ ဆာဒင်းငါး ဗာဒံစေ့ ငါးသေတ္တာ ချိစ် နို့ ဒေါက်ခွါ၇ွက် နှင့် လိမ္မော်၇ည်တို့မှာ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများဖြစ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်ဒီဟာ အ၇ိုးများကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့ကို အထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်။ မနက်၆နာ၇ီမှ ၁၀နာ၇ီတွင်း ၇ှိတဲ့ နေေ၇ာင်ခြည်ဟာ အ၇ိုးကျန်းမာမှုတွက် သဘာဝဆေးတခုပါ။တူနာ ဆယ်လ်မွန်ငါး ကြက်ဥ နို့ထွက် အစားအစာများ ချိစ်နှင့် အမဲအသည်းများကို စားသုံးပေးလျင်လည်း ဗီတာမင်ဒီ ၇ရှိစေပါတယ်။
အစားလျော့စားခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်လျော့စေနိုင်ပေမယ့် ကျန်းမာေ၇းအမြင်နဲ့ကြည့်လျင် မသင့်တော်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်၇ှိ အ၇ိုးများသိပ်သည်းမှုကို လျော့နည်းလာစေပြီး အ၀လွန်ေ၇ာဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသက်သုံးဆယ်၇ွယ်ေ၇ာက်တဲ့ခါမှာ အ၇ိုးများသိပ်သည်းမှု လျော့ကျလာလို့အချိန်ကြာတဲ့ထိ ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့တွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
အ၇ိုးသိပ်သည်းမှုကို ဆိုး၇ွာစွာထိခိုက်စေတာမို့ ဆေးလိပ်သောက်တတ်လျင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။
နေ့တနေ့အစကို ကော်ဖီတခွက်နှင့် အစပြုဓာတ်ကြပေမယ့် ကဖင်းဓာတ်များလွန်းလျင် အ၇ိုးပွေ၇ာဂါဖြစ်နိုင်တာမို့ ကဖင်းဓာတ်အလွန်ကျူး စားသုံးမှုကိုေ၇ှာင်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အတူ အိုမီဂါသ၇ီးပါစားသုံးပေးလျင် အ၇ိုးအဆစ်နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေပြီး အ၇ိုးပွေ၇ာဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
အ၇ိုးကိုဆွဲဆန့်ထားနိုင်တဲ့ ကော်လာဂျင်ဟာ အသက်၇ွယ်ကြီးလာတာနှင့်အမျ လျော့နည်းလာပါတယ်။အ၇ိုးစွပ်ပြုတ် င၇ုတ်ပွ ဖ၇ုံစေ့ အချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့ အသီးနှံတွေ ကြက်ဥ ဘဲဥစတဲ့ ကော်လာဂျင် ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတေကို စားသုံး၇ပါမယ်။
အ၇ိုးများကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့တွက် ပ၇ိုတင်းဓာတ်နှင့် ကယ်လ်စီယံဓာတ်နှစ်မျိုးလုံး လုံလောက်စွာ စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ပင်လယ်စာ နို့ ချိစ် ပဲ ကြက်ဥ ဘဲဥတွေကနေ ပ၇ိုတင်းဓာတ်၇နိုင်ပါတယ်။
ဆိုဒီယမ်သုံးစွဲမှုများလျင် အ၇ိုးကျန်းမာေ၇းကို ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ဆားသုံးစွဲမှုများလျင် ကယ်လ်စီယမ်ကိုလျော့နည်းစေပြီး အ၇ိုးတွေကြွပ်ဆတ်မှုဖြစ်စေနိုင်လို့ ဆားလျော့စားပါ။
WebMD. (2018) Bad to Bones: What to Avoid for Bone’s Health. Accessed: 12 July 2018.
ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းခြင်း. (2018). Senior Health. Accessed: 12 July 2018.
အလုပ်စားပွဲမှာပဲအထိုင်များသူ များဝိတ်ကျဖို့ လိုက်နာသင့်သည့်နည်းလမ်းများ →